I-2019 #NABBonisa: Umkhiqizo ocacile: I-HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » I-2019 #NABBonisa: I-Product Spotlight: HyperDeck Extreme 8K HDR nge-Blackmagic Design
I-HyperDeck Extreme 8K HDR entsha esuka I-Blackmagic Design ihlelwe ukuba ibe isixazululo esiphelele esiphezulu sokusakazwa kwesizukulwane esilandelayo, ukukhiqizwa okubukhoma kanye nezinhlelo zokusebenza zokubonisa izedijithali. Idizayinelwe ukuxhumeka okungafaniyo, i-HyperDeck Extreme 8K HDR ingasetshenziswa njengesidlali sevidyo, irekhodi le-ISO cam, kanye / noma irekhodi elihle. Futhi, izimpendulo ze-analog zizovumela ukuthi amateyimu wevidiyo amadala angeniswa ukuze asetshenziswe ekuhleleni noma kusevisi yokusakaza. Yakhiwe nge-10G Ethernet, i-HyperDeck Extreme 8K HDR, ishesha isivinini sokulayisha okusheshayo kwezindaba. Uma isetshenziswe njengomsakazo wensimu, i-unit ihlanganisa I-HDMI, I-SDI kanye nezimpendulo ze-analog ngezindawo ezakhelwe ngaphakathi kanye ne-3D LUTs!
I-HyperDeck Extreme Control iletha abasebenzisi ukulawulwa kwendabuko yesonto lokusakaza nge-shuttle enkulu! Ihlanganisa ama-media slots amabili, i-Quad 12G-SDI ye-8K, ukuxhumeka kwe-analog yokugcina, ukurekhoda kwe-disk yangaphandle kwe-USB-C, isiphakamiso sephambi langaphambili kanye nokufaka kwekhanda lekhanda kunika abasebenzisi ngezilawuli eziningi zendabuko. Futhi, yenzelwe ku-studio noma endaweni indawo iyunithi yokuxhumana kwamandla we-AC ne-DC. Isici se-RS-422 Control can lawula izinhlobonhlobo zezinsika, kufaka phakathi i-Digital Betacam, ifomethi ye-1 intshi C, ne-Betacam SP, ephelele yokugcina umsebenzi nokuguqula phakathi kwamafomethi.
I-unit iphinde ihlanganise amakhadi amabili asekela ama-CFast omthombo wokuqopha okungavumelekile. Amafayela we-H265 amancane, ngakho-ke aqoshiwe Amahora amaningi ekhadini elijwayelekile le-CFast linokwenzeka kakhulu! Nge-H.265, ungarekhoda amaminithi we-498 ku-8Kp60 ekhadini le-TB le-1, imizuzu engu-1,059 ku-2160p60 I-Ultra HD nemizuzu ye-2,354 ku-1080p59.94 ekhadini le-TB le-1. Kuphelile amahora angu-8 ku-8K nangaphezulu kwamahora we-39 HD! Ukuqeda amafreyimu ahlahliwe i-HyperDeck Extreme 8K ine-PCIe flash disk ezosetshenziselwa njenge-cache yokurekhoda, isilondolozi siyothatha ngokuzenzakalelayo futhi sirekhode noma yikuphi okuqukethwe abezindaba abangazange babambe. Ukwakhiwa kwesikhala ngisho nokushintshela kwi-HDR izingcaphuno uma usebenza kumafomethi we-HDR! Amafayela athengwe ngolwazi olufanele lwe-HDR bese i-SDI futhi I-HDMI izimpendulo zizobona ngokuzenzakalelayo amavidiyo we-HDR. Imethadatha eqondile ye-PQ ne-HLG ifomethi isingathwa ngokuvumelana nesilinganiso se-ST2084. I-LCD ekhanyayo inebala lombala obanzi kakhulu ukuze ikwazi ukusingatha kokubili Rec. I-2020 ne-Rec. Izikhala ze-709. Ukwakhiwa kwe-gamut ye-HyperDeck Extreme 8K HDR ye-LCD ingaphatha ngisho ne-100% yefomethi ye-DCI-P3.
Vakashela le I-Blackmagic Design ku-2019 #NABShow idokodo #SL216 for imiboniso kanye nezicelo.
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa I-NAB Bonisa i-2016 imisebenzi ye-nab show I-NAB Bonisa Las Vegas I-NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow I-National Association of Broadcast Show Show	2019-04-08
Ngaphambilini: I-Epic Games 'ye-Unreal Engine iwina ama-Emmy ezobuchwepheshe futhi ifakiwe ku-50 Ukusakazwa kwababambisene nozakwethu ku-NAB 2019
Olandelayo: Ukwethulwa kwe-Frame.io Developer Platform no-Zapier Integration